Baibolin'ny mitoto, Balles Mill Mill, Baibolin'ny vy ho an'ny fitrandrahana - Goldpro
Niorina tamin'ny Jona 2010 ny Goldpro New Material Co., Ltd., ny renivohitra voasoratra anarana dia 200.3 tapitrisa （RMB）, izay manana faritra 100.000 metatra tora-droa, ary manana mpiasa maherin'ny 260, ao amin'izy ireo dia misy mpiasan'ny R&D ara-teknika 60. Goldpro dia orinasa manana teknolojia avo lenta amin'ny fikosoham-bary famoronana, cylpebs mitoto, tehina mitoto, linera ary akora sy vokatra hafa hafa amin'ny fampandrosoana, famokarana, fitiliana, varotra ary serivisy.
Ny Goldpro dia mamokatra amin'ny bolongam-bary mifangaro, ny fametahana cylpeb, fametahana basy ary liner izay ampiasaina amin'ny vanja, zavamaniry herinaratra, fitaovam-panamboarana ary indostrian'ny fikosoham-bary hafa. Amin'izao fotoana izao, manana andrana famokarana 14 manadino sy mihodina isika, miaraka amin'ny herinaratra 200,000 taonina. Goldpro no fototry ny famokarana haino aman-jery marika sy matihanina lehibe. izay manokana ho an'ny SAG Mills lehibe ao an-trano.
Ny vokatra Goldpro dia tafiditra ao amin'ny sokajy famporisihana ao amin'ny Katalogin'i Shina ho fanarenana indray ny indostrian'ny fanoratana; Goldpro's dia nanatontosa tsara ny fanabeazana momba ny fiarovana, ny famonjana mahomby, ny fanamafisam-peo ary napetraka tsara ny Rafitra fiarovana, ny fepetra fisorohana mahomby. Ny loza momba ny fiarovana dia voamarina sy ahitsy ara-potoana, ary 0 ny lozam-pifamoivoizana.
Mampiasa herinaratra sy entona voajanahary ny Goldpro, izay tsy misy loto. Goldpro dia nahazo ny taratasy fanamarinana momba ny rafi-pitantanana kalitao, sy ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy fiarovana. Goldpro dia orinasa faharoa natokana ho an'ny famokarana fiarovana amin'ny fananganana ara-pahombiazana, nahazo ny fanamarinana ny fenitra fiarovana ny asa.
Goldpro dia ny "fifandraisana fifandraisana mirindra AAA ao amin'ny faritanin'i Hebei" Goldowo dia eken'ny Federasiona Iraisampirenena momba ny varotra; Ny Goldpro dia mampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny orinasa amin'ny alàlan'ny fametrahana "orinasa telo-telo" (modely fianarana, ny fanavaozana ary ny fitsinjarana ny vidiny）, manatsara ny indostrian'ny fikosoham-bary manohy ny angovo tsy mitsaha-mitombo ary mampihena ny fanjifana, mamita ny toe-javatra fandresena miaraka amin'ireo mpampiasa azy mandritra ny fotoana maharitra! Andraikitra ara-tsosialy Goldpro: mandoa hetra feno, miroborobo ny toekarena isam-paritra, manome asa, manamafy ny fampandrosoana ara-tsosialy, ary manome fanampiana maharitra ho an'ny mpianatra sy ny fianakaviana sahirana; fikarakarana maha-olona: Ny mpiasa rehetra dia manana fizahana ara-batana tsy tapaka indroa isan-taona. dia miakanjo tsara sy manao fientanentanana momba ny fiarovana sy ny foto-drafitr'asa fiarovana isam-bolana.
Ny fanombanana ny mpanjifa Eny, tiako be izany. Ny fotoana farany niarahako tamin'ny orinasanao dia tena nahafinaritra. Manantena aho fa afaka hiara-hiasa indray amin'ny ho avy, misaotra.
ny vaovao sy ny vaovao